Ulwandle olumnyama - Wikipedia
Imephu yolwandle olumnyama
Ulwandle olumnyama lulwandle oluse-Eurasia phakathi kweYurophu, iCaucasus, kunye neAnatolia. Imilambo emikhulu emininzi iqhagamshelana nolwandle olumnyama, enje ngemilambo Don, iDanube, kunye neDnieper.
Luqhakamshelana kulwandle iAtlantic ngolwandle imediternean, ulwandle iAegean, nakwimizila yamanzi emininzi. I90% yonke yolwandle ayinaOksijin. Amanzi ngaman'anetyuwa kodwa ubutyuwa bawo bunganeno kunobo bolwandle. Kwiminyaka yokuphungulwa kobushushu emhlabeni -ice age, ulwandle olumnyama lwalusisidibi samanzi ahlaziyekileyo.
Kwiintsomi zesiGrike, iiArgonaut zikhenketha elwandle. AmaGrike abeka amakoloni ukuze ajikeleze ulwandle kuba kwakubalulekile ukuthengiselana namazwe amaninzi kwimbali kwiimbali zakudala. iphulo leGallipoli ngemfazwe yoku-1 yayikukulwela ukungena kuLwandle olumNyama. Lwalubalulekile kwiMfazwe yesi-11 kwiHlabathi.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-31 EyoMqungu 2016, kwi-03:44